विभत्स दोरम्बा हत्याकाण्डमा बाँचेका एक माओवादीको बयान | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more विभत्स दोरम्बा हत्याकाण्डमा बाँचेका एक माओवादीको बयान
November 26, Thu
विभत्स दोरम्बा हत्याकाण्डमा बाँचेका एक माओवादीको बयान
साउन ३२ गते, २०७७ - १३:५३
निस्किनेवित्तिकै घरको सुरमा एक सेना मलाई गोली हान्न तयार थियो । म फूत्त निस्कें । त्यो सेनाको राईफल च्याप्प समातेर उसलाई त्यहीं लडाइदिएँ । उत्तापट्टि मकै घारी थियो । म उत्ता फड्किएँ । म दुई कान्ला झर्ने बेलासम्म एक जना गयो भनेर कराउँदै थिए । मलाई गोली हाने तर लागेन । म तेस्रो कान्लामुनी गएर बसेँ ।
०५९ मा त्यो युद्धविरामको समय थियो । दुईपक्षबीच आफू भएको स्थानबाट ५ किलोमिटर टाढा नजाने सम्झौता थियो । तर, उनीहरुको युद्धविराम भङ्ग गर्ने योजना रहेछ । मध्यान्ह १२ः ३० मा सेनाले एक्कासी आक्रमण गर्यो । त्यहाँ हामी ३३ जना साथीहरु थियौं । त्यसमध्ये ११ जना फूत्किन सफल भयौं । २२ जना साथीहरु सेनाको आक्रमणबाट मारिए । २ जनालाई घटनास्थलमै गोली हानेर मार्यो । अरु बाँकीहरुलाई सेनाले समायो । डेढ घण्टा जति पर डाँडाकट्डीमा लगे । गोठालाहरुले सुनाए अनुसार–‘हामीलाई कहाँ लैजान खोजेको भनेर सोध्दा मन्थली भनेका थिए ।’ त्यतिबेला उहाँहरुले हामीलाई की यही छोड्दे की यही मार भनेका थिए । ‘यो युद्ध विरामको बेला छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो । तिमीहरुले समाउन पाउँदैनौं । हामीले पनि तिमीहरुलाई केही गरेका छैनौं ।’ पक्राउ परेका साथीहरुले भनेका थिए ।
दोरम्बा घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उलंघनको घटनाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस घटनालाई युद्ध अपराध भनिएको छ । मानवअधिकार आयोगले पनि युद्ध अपराधको रुपमा पुष्टि गरेको छ । अहिले लामो समय भइसक्यो । यस घटनालाई कसैले बिर्सिए होलान् । तर यो बिर्सने खालको घटना होइन । जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो घटना हो । त्यसले युद्धविराम भङ्ग भयो । त्यसले देशलाई थप द्वन्द्वमा लग्यो ।
निस्किनेवित्तिकै घरको सुरमा एक सेना मलाई गोली हान्न तयार थियो । म फूत्त निस्कें । त्यो सेनाको राईफल च्याप्प समातेर उसलाई त्यहीं लडाइदिएँ । उत्तापट्टि मकै घारी थियो । म उत्ता फड्किएँ । म दुई कान्ला झर्ने बेलासम्म एक जना गयो भनेर कराउँदै थिए । मलाई गोली हाने तर लागेन । म तेस्रो कान्लामुनी गएर बसेँ । भित्रभएका साथीहरु भित्रै थिए । मसँगै निस्केको भए एक दुई जनालाई मार्न सक्थ्यो, हतासमा नमार्न पनि सक्थ्यो । म निस्केपछि भित्र भएका साथीहरुले सेनासँग वार्ताको प्रस्ताव राख्नुभएछ । तर सेनाले किन वार्ता गथ्र्यो । सबैलाई समायो । पछाडि हात बाध्यो लिएर हिड्यो ।
यसरी फुत्किएँ म
त्यो दिन दोरम्बामा हाम्रो पार्टीको एरिया समितिको मिटिङ थियो । म रामेछाप जिल्लाको इन्चार्ज थिएँ । बिहान खाना खाएर मिटिङको तयारीमा थियौं । कुहिरो लागेको थियो । बिहानैदेखि पानी परेको पर्यै थियो । सेनाले अघिल्लो दिनदेखि नै मूभ गरेको रहेछ । साथीहरुलाई बुझ्न लगाउँदा त्यस्ता गतिविधिहरु केही पनि देखिएन । त्यो दिन एक साइड सेन्ट्री पनि राखेका थियौं । तर उनीहरु मन्थलीबाट जंगलैजंगल रातभरी हिडेर आएछन् । हामी बसेको घरभन्दा डेढ किलोमिटर पर जंगलमा लुकेर बसेका रहेछन् । जुन घरमा सेना बसेको थियो । त्यही घरको मान्छे मासु खोज्ने बहानाले हामी बसेको ठाउँमा आएको थियो । हामीले त्यसलाई खासै चासो गरेनौं ।
उनीहरुले बिस्तारै गाउँलाई घेरा हालेछन् । गाउँलेहरुलाई कसैलाई पनि बाहिर निस्कन पाउँदैनौ भनेछन् । हामीलाई भन्न आउन चाहने मान्छेलाई पनि उनीहरुले आउन दिएनन् । हामी बसेको घर पनि घेरा हाले । घरको मुनीबाट केही साथीहरु मिटिङको लागि आउँदै थिए । उनीहरुलाई गोली हानियो । उनीहरु त्यही लडे । एक जना आर्मी पोजिसनमा बसेको रहेछ । साथीहरुलाई बाहिर निस्कँऔं भनाैँ । म बाहिर निस्केँ ।
म अगाडि लाग्छु । तिमीहरु पछिपछि आउनु भनेँ । निस्किने वित्तिकै घरको सुरमा एक जना सेना देखेँ । ढोकापट्टी बन्दुक सोझ्याएर बसेको थियो । म फूत्त गएर त्यसको राईफल च्याप्प समातेर त्यसलाई त्यहीं लडाइदिएँ । म अर्कोपट्टी फड्किएँ । मकै घारी थियो । दुई कान्ला झर्ने बेलासम्म ‘एक जना गयो भनेर कराउँदै थिए’ । मलाई गोली हाने तर लागेन । म तेस्रो कान्लामुनी गएर बसेँ । भित्र भएका साथीहरु त्यही बेला निस्केछन् । मसँगै निस्केको भए एक दुई जनालाई मार्न सक्थ्यो । हतासमा नमार्न पनि सक्थ्यो ।
म निस्केपछि भित्र भएका साथीहरुले ल वार्ता गरौं भनेछन् । तर सेनाले किन वार्ता गथ्र्यो । सबैलाई समायो । पछाडि हात बाँधेर लिएर हिड्यो । गाउँका मान्छेहरु हेरेको हेर्यै भए । म सानो खोल्सी नजिकै रहेको अर्को घरमा गएर बसें । एक जना साथीलाई पिछा गर्न लगाएँ । दोरम्बा बजारमै बन्दुकको आवाज आयो । उनीहरुले हामीसँग भएको एउटा राईफल लगे । डिउटीमा भएका साथीलाई पनि मारे ।
यसरी गरिएछ विभत्स हत्या
जंगलमा गाइबाख्रा चराइरहेका गोठालाहरुले सुनाए— सबैका हात पछाडि बाधिएको थियो । दोरम्बाबाट १ घण्टाको दुरीमा रहेको जंगलमा समातिएका माओवादी नेता कार्यकर्तालाई पुर्याउँदा उनीहरु रक्तमुच्छेल अवस्थामा थिए ।
समातिएकाहरुलाई लाइनै हिडाइएको थियो । बीचबीचमा सेनाका जवानहरु थिए । समातिएकाहरुलाई उनीहरु प्रत्येक मिनेटमा बन्दुकका कुन्दाले हान्थे र समातिएकाहरु चिच्याउँथे । जंगलमा राखिएको १ घण्टासम्म निर्मम याताना दिइयो । मानिसहरु चिच्याएको आजाव टाढाटाढासम्म सुनिन्थ्यो । १ घण्टापछि लगातार गोली पड्किएको आवाज आयो ।
उनीहरुको विभत्स हत्या गरिएको थियो। कसैका हात बाधिएको बाधिएकै थियो भने कसैका हात फुकाइएको अवस्थामा थियो । जंगलमा छरपष्ट २१ जनाको लाश थियो ।
ती साथीहरुलाई सम्झदा
त्यतिबेला मैनकुमार मोक्तान भन्ने रामेछाप जिल्ला सेक्रेटरी थिए । राज्य समितिका सदस्य बाबुराम तामाङ ‘पुष्प’ लाई पनि त्यहीँ हत्या गरियो । मेरी श्रीमती अम्बिका दाहाल उनलाई पनि सेनाले त्यहीं मार्यो । जुन इलाकाको बैठक बस्दै थियौं त्यो इलाकाको सचिव नै मेरी श्रीमती थिइन् । त्यहाँ ललिका भनेर सबै मान्छेले चिन्थे । रामेछापमा मभन्दा उनी बढी चर्चित थिईन् । अघिल्लो दिन हामीले आन्दोलनका विषयमा कुरा गरेका थियौं । अरु विषयमा कुरा हुन पाएन । पहिले अलि बिरामी थिइन् । संकटकालकै बेला उपचार पनि गरिराखेकै थियौं । टाउको सम्बन्धी समस्या थियो । ठीक त्यसैबेला त्यो रोग भने निको भइसकेको थियो । पार्टीमा पहिलेभन्दा निकै राम्रो काम गर्ने लक्ष्य थियो उनको । हामीले मिटिङ कसरी बस्ने, संगठनात्मक विषय के हुनसक्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरेका थियौं । तर सेनाले बर्बर हत्या गर्यो ।
त्यो घटनालाई सम्झदाँ
दोरम्बा घटनालाई मैले दुईवटा कोणबाट हेरेको छु । सकारात्मक कोण भनेको त्यतिबेला वार्ता भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई एक ठाउँमा लगेर सक्याउने दुश्मनको रणनीति थियो । त्यो घटनाले त्यो रणनीतिलाई फेल गराइदियो । त्यो बलिदानीले विश्वव्यापी रुपमा माओवादी आन्दोलनलाई चिनायो । बलिदानले थप उर्जा थप्यो । त्यसैको आडमा संविधानसभा, गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकारको कुरा सुरु भयो । त्यो घटनाले यहाँको शासक ती मुद्दाहरुलाई छिटो लागू गर्न बाध्य भए । यहाँको शासकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गर्यो । यहाँको राज्य सत्ता अपराधिक रहेछ भन्ने पुष्टि गर्यो । दोरम्बा घटनालाई नकारात्मक रुपमा हेर्ने हो भने, हामीले त्यति ठूलो जनशक्ति सुरक्षा गर्न सकेनौं । त्यसको पछाडि युद्धविरामको मनस्थितिले भूमिका खेल्यो ।
यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ तर नेताहरुले यो घटनालाई बिर्सेका छन् । त्यस्तै बलिदानले यो पार्टी यहाँसम्म आईपुगेको हो । अझ यो घटना युद्धविरामको बेलाको घटना भएका कारणले यसको उचाई अलि बढी नै छ । त्यो अवस्थाबाट आएको पार्टी यतिबेला लथालिंग ५/६ वटा भएका छन् । त्यो बलिदानलाई नेताहरुले उपहास गरे भन्ने मलाई लाग्छ । फूट्न हुन्न थियो । हाम्रो योजना फूटेर सफल हुदैन थियो । पछिल्लो समय नेताहरुमा नीजि स्वार्थ, सत्ताको स्वार्थ देखियो । सिंहदरबार भित्र छिरेपछि नेताहरुले बलिदानीको कुरा बिर्सिए । मान्छे बेपत्ता भएको कुरा पनि बिर्से । सत्ताको वरिपरि घुम्नाले पार्टीको आकार पनि सानो बन्न गयो ।
(दाहाल हाल नेकपाका केन्द्रिय सदस्य छन्)
साउन ३२ गते, २०७७ - १३:५३ मा प्रकाशित
पार्टी बैठक टार्ने ओली रणनीति –समय जुधाएर मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइयो
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठककै सम पारेर मन्त्रिपरिषदको...
गएराति चिनियाँ राजदुत र प्रधानमन्त्रीबिच के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । नेकपाभित्र विवाद चुलिएको बेला चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी...
आगामी तीन दिनको मौसमको यस्तो छ पुर्वानुमान –यात्रामा सचेत हुनुहोस्
काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी तीन दिन देशको अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने भएको छ । जल तथा...
के हुन्छ नेकपाभित्रको अन्तरविरोधकाे निकास, कसको कोर्टमा छ ‘बल’ !
नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले ठूलो ‘हलचल’ मच्च्याएको छ । प्रतिवेदनमा...
के छ प्रचण्डले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ? (पुर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सकिएको छ । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल...
मार्क्सवाद सङ्घर्ष र मुक्तिको दर्शन हो, बुद्दीविलासको होइन–नारायणकाजी
नेकपामा नयाँ वैचारिक बहस
निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले यी काम गर्नुपर्छ – डा. रवीन्द्र पाण्डे